दोस्रो पृथ्वी पत्ता लगाएको नासाको दाबी, जहाँ पाइन्छ पानी !! – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /Science & Tech News/दोस्रो पृथ्वी पत्ता लगाएको नासाको दाबी, जहाँ पाइन्छ पानी !!
अमेरिकी अन्तरिक्ष एजेन्सी (नासा) का वैज्ञानिकले दोस्रो पृथ्वी पत्ता लगाएका छन्। उनीहरुले पृथ्वीको आकार रहेको दोस्रो ग्रहण फेला पारेको दाबी गरेका छन्। सबैभन्दा रोचक कुरा के छ भने उक्त ग्रहको सतहमा तरल पदार्थ पानी रहेको छ। नासाले अमेरिकन एस्ट्रोनोमिकल सोसाइटीको २३५ औँ बैठकमा यसको खुलासा गरेका हुन्।
नासाका अनुसार उक्त ग्रह हाम्रो सौर्य मण्डलबाट नजिक रहेको छ। यसको दूरी करिब १०० प्रकाश वर्ष रहेको छ। नासाको ट्रान्जिटिङ एक्सोप्लेनेट सर्वे सेटेलाइट र स्पिट्जर स्पेस टेलिस्कोपको सहयोगमा यस ग्रह खोजिएको थियो। नासाका वैज्ञानिकले यस ग्रहणको नाम टीओआइ७००डी राखेका छन्।
यसले सूर्य जसरी एक तारालाई टीओआइ ७०० ले चारैतर्फ चक्कर लगाउने गर्दछ। टीओआइको वजन हाम्रो सूर्य भन्दा आधा रहेको छ। यसको तापक्रम ४० व्रतिशत कम छ। नासाका वैज्ञानिकका अनुसार यो डोराडो स्वर्डफिश नक्षत्रमा अवस्थित छ। जो हाम्रो आकाशसंगाको दक्षिण क्षेत्रमा अवस्थित छ। नासाका वैज्ञानिकले यस ग्रहणमा वातावरण र सहतको तापक्रम र वनावटको मोडल तयार गरिरहेका छन्।